Jwxo-shiil, oo ka Shaqaynaya Dab in uu Dhexdhigo Puntland iyo Ummada Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Oct 25, 2009 ethiopia, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo, Puntland
Jwxo-shiil, oo kolkii uu ku guulaysan waayey in uu iska horkeeno ummada Somalida Ogadeeniya dhexdeeda gudo iyo dibadba, bilaabay in uu dhibaato ka dhex abuuro labada shacab ee dariska ah Puntland iyo Somalida Ogadeniya.
Waxaa dhab ah in maanta ay ummada Somaliyeed wada oggaatay in Jwxo-shiil iyo inta la soctaa ayna ku jirin arimo Jabhadeed, oo ay leedahay ummada Somalida Ogadeeniya, balse waxa ay wadaan ay tahay burburinta xooggaagii ka hadhay Jwxo, oo haatan ay gadhwadeen ka tahay GS-Jwxo, oo uu hogaamiye ka yahay Engineer Saalax.
Jwxo-shiil, waxaa uu wadaa olole uu ku doonayo in uu iskaga horkeeno labada shacab ee Puntland iyo Somalida Ogadeeniya, labadan shacab waxaa ka dhaxeeya xidhiidh xoog leh oo meelo badan iska haysta, una malaynmaayo in Jwxo-shiil qof la mid ah in ay waxyeelayn karaan xidhiidhkaas qotada dheer leh.
Jwxo-shiil, waxaa haysata maanta magac xumo weyn, oo sida aan is leeyahay ayna jirin shakhsi Somali ah oo taariikh xumadaasi leh xitaa Muuse Yalaxow; waa 80 jir gacan ku dhiigle ah, waa 80 jirin doonaya in uu khasab wax ku xukumo, waa 80 jir Beenaale ah oo aan qawlka dharban aqoon, waa 80 jir salka dhulka ugu dhuftay halgankii ay ummada Somalida Ogadeeniya soo waday 25kii sano ee ugu dambeeyey.
Ethiopa, waxay awood siyaasadeed iyo mid ciidanba ku qabsatay dalka Somaliya ka dib, dagaalkii shacab ee ka dhacay dalkaasi, waxayna ka fulisaa gabalada Somaliya wax alaale waxa ay doonto iyada oo aan u kala aabo yeelaynin. Ethiopia xiligan waxay nasisay ciidamadeedii waxayna samaysay ciidamo aad u xoog badan oo kuligoodba ay hore uga tirsanaayeen Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], arintaas oo uu sababteeda lee yahay Jwxo-shiil.
Ciidamadan oo loo yaqaan New Police oo dhamaantood Somali ah, waxay tagaan gabal kasta oo Somaliya ah, waxayna u sheegaan maamul gabaleedyada Somaliya, arimo badan oo ku saabsan nabad galiyadeeda, wayna ku khasban yihiin maamul gabaleedyadu in ay raacaan amaradeeda, cida ay doonaan way xidhaan ama way dilaan iyaga oo aan cidna weydiisan. Arimahaas ma aha wax ay awood u leeyihiin maamul gabaleedyada Somalidu in ay joojiyaan, waxaana masuuliyadeeda leh dadnimo xumo guud oo haysata Somalida, taas oo ah in ayna iyagu heshiin karin dawladna samaysan karin, taas oo keentay in midba gooni loo amro.
Hadaba, arimaha uu Jwxo-shiil galinayo warbaahinta ma aha mid ay raali ka tahay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [GS-Jwxo], waa mid ku kooban Gacan ku dhiigle Jwxo-shiil, oo isagu jecel ka hor inta ayna tii Rabi u imanin in uu arko dad badan oo ka hor dhinta isaga, sababtana lama garanayo.
Puntland, Somaliland iyo Koonfurta Somaliya dadweynaha Somaliyeed ee degan waxay u hayaan wanaag iyo xurmo Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] iyo ummada Somalida Ogadeeniya, horena waxay u gashadeen abaal weyn, gadaalna abaal way ugu gali doonaan, Abaalka ay noo galaana waxaa u haya dadweynah Somalida Ogadeeniya iyo Jabhadoodaba.
Arimaha foosha xun ee uu Jwxo-shiil hore uga dhex abuuray, dadweynaha Jamhuuriyada Somaliya iyo ummada Somalida Ogadeeniya, waxaa ay ku kooban yihiin Jwxo-shiil kaligii, wixii kale ee uu haatan maleegayana kaligii ayey ku kooban yihiin.